DOWLAD GOBLEEDKA PUNTLAND EE SOOMAALIYEED
Yaa u Garniqi Doona Golayaasha DGPL marka ay isqabtaan???
Dhismihii Dowlad Gobleedka Puntland kaddib waxaa soo baxaayay muran la xiriira Dastuurka kana dhex aloosma goloyaasha DGPL, kaas oo mar walba ay ka jirtay in la waayo cid u xil saran oo kala saarta, xubnaha is haysta, kaasoo mar walba ku dhammaanaysa Deeq Alle iyo karaamada shacbiga reer Puntland, marka laga reebo dagaalkii adkaa ee socday dabayaaqaddii sanadkii 2001 ilaa bartamihii sanadkii 2002, taasoo ilaa hadda aan lahayn cid u xil saaran kala saarida is qabadka goloyaasha.
Haddaba sida ku cad dastuurka Qodobkiisa 74aad wuxuu sheegayaa dhismo Maxkamad dasuuri ah, sidoo kale qodobka 75aad wuxuu sheegayaa in arimaha ay u xilsaaran tahay Maxkamadda Dastuuriga ay ka mid yihiin:-
Maxkamaddu waxay u xil saaran tahay Arimaha Dasuuriga ah oo keliya.
Dacwadaha Ciqaabta iyo dacwadaha lidka ku ah Madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, wassiiradda, xildhibaanadda, iyo madaxda sare ee Dowlada, waxaa galeysa Maxkamadda Dastuuriga ah.
Maxkamadda dastuuriga ahi waxay kaloo awood u leedahay ka turjumidda is maandhaafka ka yimaadda dastuurka iyo qawaaniinta kale. Maxkamadda dastuuriga ahi waxay kaloo dhageysanaysaa dacwadaha uga yimaada;
Codsi sadex meelood halmeel oo xubnaha golaha wakiiladdu u soo gudbiyaan, in qodobo ama go�aan golayaasha dowladdu ku xad gudbay dastuurka.
Marka qof ama ka badan ee shacbi ahi ku soo dacwoodaan xaquuqdoodii asaasiga ahayd ee dasturrku siiyay.
Markii qayb ama laan ka mid ah dowladda ay codsato inay go�aan ka gaarto is maandhaaf u dhaxeeya awoodaha dowladda, waana tan keentay in maqnaanshaha Maxkamad dastuuri ah khilaafyadda ka dhex dhasha golayaasha Dowladda Puntland loo waayo meel lagu xaliyo, taasoo nidaamka ku noqon karta Qaran jab ama Zero, dhismaha maxkamaddani waxay dan u tahay guud ahaan dalka gaar ahaan golayaasha.
Sidaas darteed waxaan kula talinayaa golayaasha awooda u leh dhismaha maxkamadda dastuuriga ah inay dhisaan maxkamadaas eeg qodobka 74aad, lamberka 9aad, ayagoo Alle ka yaabaaya islamarkaasna helaan meel ay ku kala baxaan, bulshadana u horseedin gacan ka hadal iyo is colaytan sidii horey u dhacday, waa ceeb adduunyo nidaam dhisan oo xal u waaya khilaafkiisa gudaha.
FG:- Dhismaha Maxkamadda Dastuuriga ah waa inay ka danbeysaa oo kali ah dhismaha xukuumadda muddo lix bilood ah eeg qodobka 74 lamberka 1aad.
Qore:- Lataliyaha Sharciyada Xafiiska Hanti-dhowrka Guud ee DGPL
Mudane: Maxamuud Axmed Xaashi
"ERayga Cagaare"oo la soo afjarayo
: Waxaa lagu guda jiraa dhamaystirkii heshiiskii tuulada Cagaare ee duleedka Qoriley ee xuduudka gobolada Nugaal iyo Sool.
Cagaare oo dagaal ku dhexmaray meleeshiyo beeleedyo isku qabsaday degaan ayaa waxaa kunaf weeyey 10-neeyo qofood, halka dadkalena ku dhaawacmeen.
Arintaan dhamaystirka khilaafkii cagaare ayaa waxaa hormuudka ah guddi iskugu dhafan issimo, wasiiro, aqoonyahano, waxgarad iyo xildhibaano ka tirsan DGPL.
Iminka waxaa la soo dhamaystiray burburintii baraagihii lagu muransanaa ee Cagaare.
Sida wararka nagu soo gaarayaan wax dhib ah kalamaaysan kulmin guddigu burburinta baraagaha, marka lagareebo, labo gaari oo muraayadaha xabado ay kaga dhufteen dhalinaro iyo nin oday ah oo jugo yar-yar lagaarsiiyey,dhalinyaradiina markii dame waxay raali-gelin kabixiyeen dhacdadaas.
Gunanaanud ka iyo geba-gebada Cagaare ayaa soodhow,halkaasna waxaa kuharaya"eraygaCagaare"